Home News Dowlad diiday in ay Ciidamadeeda Soomaaliya ka saarto ka dib markii lagu...
Dowlad diiday in ay Ciidamadeeda Soomaaliya ka saarto ka dib markii lagu amray
Dowladda Burundi ayaa si rasmi ah u diidday in ay Ciidankeeda qeyb ka mid ah ka saarto Soomaaliya marka la gaaro 28ka Bisha Februay ee soo socota.
Go’aanka Kun ka mid ah Askarta Burundi looga saarayo Soomaaliya waxaa soo jeediyay Midowga Afrika.
Laakiin Afhayeen u hadlay Milatariga Dalka Burundi oo lagu magacaabo Floribert Biyereke, ayaa sheegay in Burundi aysan 1,000 ka mid ah Askarteeda ka saareyn Soomaaliya.
Floribert Biyereke, ayaa ku dooday in marka Ciidan uu ka baxayo Soomaaliya ay tahay in dalkasta oo ka mid ah howlgalka uu qeyb la boxo, laakiin Burundi kaligeed in ay hal mar Kun askari ka saarto Soomaaliya aysan soconeyn.
Burundi waa dalka 2aad ee Ciidamada ugu badan ay ka joogaan Soomaaliya,waxaana ka jooga 5,400 oo Askari.
Dhaqaale ahaan Burundi waxaa ay lacag fiican ka soo gashaa Howlgalka AMISOM oo afartii biloodba lagu bixiyo lacag dhan $18 Milyan oo doollarka Mareykanka ah.
Previous articleXildhibaan Jeesoow oo afka furtay”Qaraxyada maxaa looga adkaan la’yahay”
Next articleXiisad Dagaal oo u dhaxeeysa Al-shabaab iyo Daacish oo ka taagan Gobolka gedo
Sargaal ka tirsan Al-shabaab oo isku soo dhiibay Maamulka Jubbaland